Chirongwa chaVaMthuli Ncube Chekugadzira Hupfumi Chokonzera Makakatanwa
Gurukota rezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube
Gurukota rezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube vanoti chirongwa chavo cheTransitional Stabilization Programme chavakaparura makore maviri apfuura kudzikamisa hupfumi chabudirira zvoonekwa nekugadzirwa kwezvivakwa uye mabasa ekubatsira vanoshupika.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoti Zimbabwe ichiri kutatarika munyaya dzezvehupfumi.
Vachitaura nebepanhau reHerald, VaNcube vanoti chikuru chavakaita kuita kuti musika wekutengeserana mari kana kuti foreign currency auction zvavanoti zvadzikamisa mitengo yezvinhu. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers VaDenford Mutashu vanoti ichokwadi mitengo yadzikira.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZanu-PF VaGilbert Muponda vanoti ichokwadi kuti pane ziya pane dovi uye nyika yave kukohwa pakuru mushure mekuvandudza zvinhu. Vapa semuenzaniso kugadzirwa kwemigwagwa, uye mabhazi eZUPCO avati ane mutengo wakaderera.
Asi nyanzvi munyaya dzezvehupfumi Muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vanoti chirongwa ichi hachina kubudirira nekuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yakatonyanya kukwira uye dhora remunyika rakatowedzera kushaya simba.
Chirongwa cheTSP ichi chakaparurwa muna Gumiguru 2018 uye chiri kutarisirwa kupetwa muna Zvita gore rino.
Chirongwa ichi chakanzi ihwaro hwekuti Zimbabwe isvike pamuono wayo kana kuti Vision 2030 kuti ive nyika ine vanhu vanokwanisa kuwana mari inosvika zviuru zvitatu nemazana mashanu pamwedzi kana kuti per capita income ye US$3500.
Chirongwa ichi chaitarisirawo kuti pavandudzwe mashandiro ehurumende uye kudzikamisa mari inoshandiswa munyika uye kuendesa masimba kumatunhu, kuripa varimi vachena nekuvandudza makambani ari pasi pehurumende uye kukwezva vekunze.
Pachinopera panenge pave nezvirongwa zvemakore mashanu kana kuti 5-year development programme kutanga muna 2021 kusvika 2025. Ko chirongwa ichi chave nemichero here sezviri kutaurwa naVaNcube kana kuti inongova gudziramukanwa.